mardi, 18 février 2020 22:22
Mpanabe tanora: Nodimandry i Jamoka Misetra
Nodimandry androany talata 18 febroary 2020 teny amin'ny hopitaly be Androva, noho ny aretina nahazo azy i Jamoka Misetra.
Tsiketa Bruno Jean de Dieu no tena anarany fa amin’ny maha Skoto azy no isalorany ny solon’anarana Jamoka Misetra. Tonia Nasionaly FS FLM izy ary Ekipa Foibe Tily teo aloha, Tari-panofanana Tily Eto Madagasikara.
Raiamandreny, Mpanabe tanora, Mpanentana fandaharana amin’ny haino aman-jery eto Mahajanga izy fahavelony.
Hiaretan-tory ao amin’ny trano fonenana eo Mahavoky - Mahajanga ny razana anio alina, miandry ny fandaharam-potoanan'ny fianakaviana.
Hisy fanamboarana hatao amin'ny Kianjan'Alarobia, izay hany kianja nahazo fankatoavana iraisam-pirenana afaka mandray fifaninanana amin'ny taranja atletisma raha eto Madagasikara.
Hifarimbona amin’ny fanatanterahana izany ny Minisiteran’ny Tanora sy ny Fanatanjahantena sy ny Tanànan'Antananarivo Renivohitra.
Nidina teny an-toerana nijery ifotony ny zava-misy sy namaritra ny asa maika hatao, ny Minisitry ny Tanora sy ny Fanatanjahantena, Tinoka Roberto, androany 18 febroary 2020. Nanome baiko ny Minisitra ny tsy maintsy hanamboarana ka hamitana ny toerana fibatana fonjamby amin'ny faran'ny volana Martsa ho avy ity.
Nandritra ny fisavana fiara natoan’ny Polisy teo amin’ny sakana eo Ankidona, tanàna isany maresaka manaraka ny lalam-pirenena faha-7 raha hivoaka ny tanànan’i Fianarantsoa, no tra-tehaka ity tovovavy nitondra sokatra miisa 37 ity. Nandeha taksiborosy avy any Toliara izy ary nikasa hitondra ny entana ho any Antananarivo no izao tratra izao. Hatolotra ny Fitsarana eto Fianarantsoa ilay tovovavy aorian'ny fanadihadiana ataon'ny Polisy azy.
Voasokajy ho biby arovana ny sokatra, noho izy ireo ahiana ho lany tamingana. Enjehin’ny lalàna ny fitondrana na fivarotana na famonoana azy ireny.
Jiolahy mpamerin-keloka i Body Mena. Vono olona no efa nisamborana azy ka nidirany am-ponja tamin’ny taona 2013 tany Nosy Be, tao Ambilobe ny 2017 sy ny taona 2018. Niampy fanolanana tamin’ity tranga farany ity. Votsotra hatrany ity lehilahy ity na efa nakarina teto Antananarivo aza tamin’ireo heloka bevava vitany.
Mbola ity Body Mena ity ihany no ahiahiana voalohany ho tompon'antoka tamin’ny famonoana ho faty an-dRazafimalala Brigitte, 35 taona, izay nitondra vohoka fito volana. Tsy hita nanomboka ny 03 febroary 2020 ity vehivavy ity. Vatana mangatsiaka efa andalam-pahasimbana no nahitana azy ny faran’ny herinandro lasa teo.
Nifanome tanana ny mpitandro ny filaminana mba hikarohana izay nahavanon-doza ka voasambotra tao Antanambao, Kaominina ambanivohitra Mantaly, Disitrika Ambilobe i Body Mena.
mardi, 18 février 2020 20:36
Zotra an-dalamby FCE: Mitady mpiasa 45
Miomana amin'ny fahatongavan'ireo lohamasinina roa, fampanantenan’ny filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina, ny zotra an-dalamby FCE (Fianarantsoa Côte-Est).
Handray mpiasa maromaro ny orinasa, ho amina toerana miisa 45.
mardi, 18 février 2020 20:26
Ambodiriana - Antanifotsy: Olona efatra voan’ny pesta atody tarimo
Misy valanaretina pesta miseho any amin’ny Kaomnina Ambodiriana Distrika Antanifotsy, Faritra Vakinankaratra. Tato anatin’ny tapa-bolana izao dia olona efatra no voamarina fa voan’io aretina io. « Pesta atody tarimo no nahazo ireo olona ireo » araka ny fanazavan’ny Talem-paritry ny fahasalamana Vakinankaratra Dr Rabenirina Mamitiana Pierre. Efa noraisana an-tanana ny fitsaboana ireo marary ireo ka tsy nisy namoy ny ainy, hoy ity farany.
Nanaovana hetsika manokana ihany koa io Distrika io sy ny Kaominina Ambodirina, ary indrindra ireo olona nifanerasera tamin’ireo marary, ka nomena ny fanafody mifanandrify amin’izany hisorohana ny fiparitahan’ny valanaretina.
Ny fahadiovana sy ny ady amin’ny parasy sy ny voalavo no fisorohana voalohany amin’ity valanaretina pesta ity, hoy ny Talem-paritry ny fahasalamana Vakinankaratra.
mardi, 18 février 2020 20:25
Antananarivo Renivohitra: Niakatra ho 5000 Ariary ny « vignette » moto
Voafaritra amin’ny tetibola 2020 ho an’ny tanànan’Antananarivo fa dia 5000 Ariary ny « vignette » ho an’ny moto manomboka izao raha toa ka 3000 Ariary izany teo aloha.
Manomboka izao kosa dia tsy misy intsony ny « vignette » ho an’ny bisikilety eto amin’ny tanànan’Antananarivo Renivohitra.
mardi, 18 février 2020 15:13
Fanampiana ny traboina: Nanolotra vary 6 taonina ny OFMATA
Tonga nanatitra vary makalioka milanja 6 taonina teny amin’ny BNGRC Antanimora androany talata 18 febroary 2020 ny orinasam-panjakana OFMATA (Office Malgache des Tabacs), notarihin’ny Tale jeneraliny Randrianatsimbazafy Eddy, anjara biriky ho fanampiana ireo traboina noho ny ranobe vokatry ny andro ratsy niseho hatramin’ny faramparan’ny volana janoary sy ny farany teo.
Nanao fanambarana tamin’ny Weibo, izay tambazotra sosialy fampiasan’ny Sinoa, i Jackie Chan milaza fa vonona hanome iray tapitrisa Yuans na 132 000 euros, manodidina ny 528 tapitrisa Ariary, ho an’ny olona na fikambanana mahita fanafody mahasitrana ny coronavirus.
Milaza ity mpilalao sarimihetsika malaza, avy any Hong Kong, ity fa « tsy te hahita intsony olona mijaly na koa maty noho io valanaretina io, nefa olona tokony mbola higoka ny hamamin’ny fiainana ».
65 taona izao i Jackie Chan. Ny sarimihetsika misy haiady no tena nampalaza azy. Nahoraka tamin’iny taon-dasa 2019 iny, ary nisy nampanantena fa ho avy teto Madagaskara i Jackie Chan, saingy tsy mbola tanteraka izany hatreto.
Jeneraly Ramakavelo Désiré: Nitondra "Fanabeazana ny olona handray andraikitra" teny amin'ny Fonjaben'Antanimora
Nanatontosa famelabelaran-kevitra narahina adihevitra tao amin'ny Fonjaben'Antanimora Antananarivo ny Jeneraly Ramakavelo Désiré ny marainan'ity 18 febroary ity.
"Fanabeazana ny olona handray andraikitra" no lohahevitry ny famelabelarana natrehin’ny ankizy tsy ampy taona beazina ao an-toerana, ny Ray aman-drenin'izy ireo, ny mpanabe azy ao Antanimora, ny mpiantsehatra tsy miankina amin'ny fanabeazana sy fanarenana ny zaza nania, ary ny tompon'andraikitra avy eo anivon’ny Minisiteran'ny Fitsarana, notarihin’ny Tale Jeneralin’ny Fandraharahana ny Fonja, Ranaivo Andriamaroahina Tovonjanahary.